IAmazon Music Unlimited isinika iinyanga ezimbini zasimahla zenqanaba losapho | Iindaba zeGajethi
AyisiyiSpotify kunye neApple Music kuphela, enababhalisi abazizigidi ezingama-60 ukuya kuma-30 ngokwahlukeneyo, ngaba umntu uyaphila, kodwa sinokufumana ezinye izibonelelo ezifanelekileyo kwimarike. Ukuthathela ingqalelo ukuba zonke iinkonzo zomculo ezisasazayo zisinika ikhathalogu efanayo, ngaphandle kokumbalwa ukuba sinokusebenzisa naliphi na isibonelelo ezahlukileyo ezisinika olu hlobo lwenkonzo, ngcono kunokuba ngcono.
IAmazon ayisiyongqangi yentengiso ye-Intanethi, kodwa ikwanayo nenkonzo yevidiyo esasazwayo, efumaneka simahla kubo bonke abasebenzisi beNkulumbuso, kodwa ikwanenkonzo yokuhambisa umculo, ikhathalogu yayo ijikeleze iingoma ezizizigidi ezingama-50. Ukubhiyozela iKrisimesi, iAmazon usinika iinyanga ezimbini zesicwangciso sosapho simahla.
Ukusukela ezinzulwini zobusuku nge-0 kaDisemba, oko kukuthi, ukusukela ngoku kude kube nguDisemba 22 ozayo nge-24: 23 pm, IAmazon isinika iinyanga ezimbini zesicwangciso sosapho, kodwa njengesiqhelo kolu hlobo lwesibonelelo, Imirhumo iphelele kwi-4.000 yokuqala, ke kungaphezulu kokucetyiswayo ukuba ubucebe ukuthatha ithuba lolu hlobo, sele uthatha. Ukuba ufuna ukusebenzisa eli thuba, kuya kufuneka wenze njalo ngale khonkco ilandelayo.
Umculo weAmazon Music Unikelo lweKrisimesi- iinyanga ezi-2 simahla kwinqanaba leNtsapho
Nje ukuba iinyanga ezimbini zidlule, okoko nje singabhalisanga ngaphambili, iAmazon iya kuqala ukubiza i-14,90 euro ngenyanga nganye. Ukuba sifuna ukugcina iintlawulo ezimbini ngenyanga, sinokuqesha unyaka wonke, kwaye songe iinyanga ezimbini, okoko nje singabasebenzisi beNkulumbuso.
Sifumana ntoni kwiAmazon Music Unlimited Rate yosapho?
Ukufikelela kwiingoma ezingaphezu kwezigidi ezingama-50.
Iiakhawunti ezi-6 ezizimeleyo, apho sinokwenza khona uluhlu lwethu lomculo olwenzelwe ilungu ngalinye losapho.
Nganye yeakhawunti ezi-6 ifumana iingcebiso ezizezakho ngokokuthanda kwawo umculo, ukuthanda izinto ezifunyanwa yinkonzo njengoko simamele umculo esiwuthandayo.
Ukufikelela kwinani elikhulu loluhlu kunye nezikhululo zikanomathotholo ezikhethwe ziingcali.
Umculo uyafumaneka ngaphandle koqhagamshelo lweintanethi.
Izixhobo ezihambelanayo: i-iPhone, i-iPad, i-iPod touch, izixhobo ze-Android kunye neetafile, iPC, iMac, isikhangeli, iipilisi zomlilo, izithethi zeSonos, kunye neDenon HEOS.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umfanekiso kunye nesandi » Ukusasaza » IAmazon Music Unlimited isinika iinyanga ezimbini zasimahla zenqanaba losapho